ထီ ကံ ကောင်းစေ ဖို့ ထီပေါက်ချင်သူ များ အဓိဋ္ဌာန် ပုတီးစိပ်နည်း – Shwewiki.com
ထီ ကံ ကောင်းစေ ဖို့ ထီပေါက်ချင်သူ များ အဓိဋ္ဌာန် ပုတီးစိပ်နည်း
February 28, 2020 By admin Knowledge
လူ တိုင်း ထီပေါက် ချင်ကြပါတယ် ဒါပေ့မယ့် ထီဆိုတာ လူတိုင်း ပေါက်တာ မဟုက် သူကံဇာ တာ နည့် ကံပေါ် မူတည် ပြီး ပေါက်ကြတယ် အဲကံဇာ အပေါ်မှာပဲ ထီဆု ကြီး ထီ ဆုလေး လေးတွေ ထပ်ခွဲ ခြား သွားတာပေါ့ ဟိုတုန်းက. ဦးဘဟန် ဆိုတဲ့ အဘကြီး သူက. ထီကံအရမ်း စမ်းတာ ကျွန်တော် က. ကြ ထီတော့ ပေါက်ချင်တယ်
ဒါပေ့မယ် ထီထိုးရမှာ အလွန် ပျင်းတယ် ဦးဘဟန် ကမင်းကွာ ကံကို အလကား ဖြုန်းတီး ပစ်တာတဲ့ထီ မထိုးလို့ ပြောတာသူကထီလည်း အရမ်း ထိုးသလို ထီကံလည် အရမ်းကောင်း တာ တစ်နှစ်ကို ဆုသေးလေ တွေ ခဏခဏ ပေါက်တာ အဲတုန်းကကိုယ်ကခပ်ငယ်ငယ် ရှိသေးတယ်စပ်ဆု တာပေါ့ ဦးဘဟန် ကြီး ထီ ခဏခဏပေါက် နေတာဘာ အဓိဋ္ဌာန်တွေ ဝင်တုန်း လို့ မေးကြည့်တော့
ခုပြောမယ့် အဓိဋ္ဌာန်ကို ပုတီးစိပ်တာတဲ့ နောင် ကျွန်တော် ဆရာ ဖြစ်လာတဲ့ အခါ တော်တော်များများ ခု ပုတီးစိပ် နည်း ပုတီးစိပ်ခိုင်း အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ခိုင်းပြီး ထီဝါသနာ ပါသူတွေ ထီ ကံစမ်းခိုင်း တာထီဆု လေးတွေ ပေါက်ကြတယ်ပေါ့လေ
မြန်မာ ထီကအခက်သား ဗျ ဂဏန်တွေ အကုန်မှန်နေတောင် အက္ခရာ လွဲသွားရင် ထီဆုနှင့် ဝေရောခုပြောမယ့် အဓိဋ္ဌာန်ကလည်း အက္ခရာ နှင့် မြတ်စွာဘုရားကို ပူဇော်ခြင်း ဂဏန်း ဖြင့် မြတ်စွာ ဘုရားကို ပူဇော်ခြင်း ဖြစ်လို့ ထီနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိမိ ကံအားလျော်စွာ ကံကောင်းလာပါ လိမ့်မယ်
အ ဓိဋ္ဌာန် ရက်ကို မိမိ ဘာသာ သက်မှတ်ပါ သိုိ့မဟုက် တစ်လ လုံး ပုတီးစိပ် ပါ တစ်ညလျှင် ပုတီး ၉ ပတ် စိပ်ရမည် ပုတီးမစိပ်ခင် မြတ်စွာ ဘုရားအား ကိန်းဂဏန်း ဖြင့် ၃. ကြိမ် ရွတ်ဆို၍ ရှိခိုးပါ သီလ ဆောက်တည်ပါ မေတ္တာ ပို့ပါ
၅ ပဉ္စကော ဗိုလ်ငါးပါး သီလတော်မြတ်ငါးပါး ဘုရားငါးဆူတို့ အား နမော ရှိခိုးပါ၏ အရှင်ဘုရား
၇. သတ္တကော ဗောဇ္ဈင် ခုနှစ်ပါး သူတော်ကောင်း တရားခုနှစ်ပါးတိုိ့အား နမော ရှိခိုးပါ၏ အရှင်ဘုရား
၁၀. ဒဿကော မဂ်လေးပါး ဖိုလ်လေးပါ နိဗ္ဗာန် ပရိတ်ယတ် ၁၀ ပါး ၁၀ပါးသော တရားတော်မြတ် ပါရမီ ၁၀ ပါး မြတ်တရား တို့ကို နမော ရှိခိုးပါ၏ အရှင်ဘုရား
ဤသို့ဆိုငြား မှန်ကန်သော သစ္စာ စကားကြောင့် မေ ကျွန်ုပ်အား ဇယ. ဂဏန်နှင့် စပ်ဆိုင်သော အောင်မြင်ခြင်း မင်္ဂလာအဖြာဖြာ သည် ဟေားတု ဖြစ်ပါစေ ကုန်သတည်း
ဆ ။ ။ ဆ လိမ် ဟူသည်ကား ဆယ်ပါးသောဒူစရိုက်တို့ကို ခုတ်ထွင်း ပယ်ဖျက်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
ဋ။ ။ဋတလင်းချိတ်ဟူသည်ကား ဒီဃလင်တကျမ်းအောက် အဖြာဖြာတိုိ့ကို ဆရာမရှိ ကိုယ်တော်တိုင် သိမြင်တော် မူသော မြတ်စွာဘုရား။
ဏ။ ။ဏကြီးဟူသည်ကား တဏှာ တည်းဟူသော အမိုက် အမှောင်တိုိ့ကို ပယ်ဖျက်ခုတ်ထွင်း အောင်မြင်တော် မူသော မြတ်စွာဘုရား ။
ဝ။ ။ဝဟူသည်ကား ဝသုနြေ္ဒ မြေစောင့် နတ်သားအား သက်သေထား၍ မာန်နတ်မင်းအား ပြည့်စုံတော်မူသော…….မြတ်စွာဘုရား….။
ဠ။ ။လကြီးဟူသည်ကား ဝေဠုဝန် ကျောင်းတော်၌လပြည့်ဝန်းကဲ့သို့ ထွန်းလင်းတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
စုစုေ ပါင်း ပုတီး ၃၆ လုံး ရရှိပါမည်၃. ခါ ပြန်စိပ်သော် ၁၀၈. လုံး ပုတီး တစ်ပက် ရမည်ဖြစ်သည် အထက်ပါ အတိုင်း နေ့စဉ် ပုတီး ၉ ပက် စိပ်ခြင်း ကိန်း ဂဏန်ဖြင့် ရှိခိုး ခြင်း တို့ ကြောင့် နေ့စဉ် အက္ခရာ ၏ ကံကောင်းခြင်း ဂဏန်း ကံကောင်းခြင်းများ ရရှိကာ ထီဆုကြီး ထီဆုလေး များ ဆွတ်ခူး နိူင်ပါလိမ့်မည်
မျက် စိအောက်က ရွှေမှုံလေးကို အပျောက် မခံနိုင်အောင် ခဖြစ်နေ တဲ့ ရွှေ ထူး (ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ)